काभ्रेमा आज ४ जना कोरोना संक्रमित थपिए – Radio Roshi
in रोशी खबर / स्वास्थ्य — by Roshikhabar —	August 11, 2020
रोशी सहकर्मी–साउन २७,
काभ्रे जिल्लामा आज ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना पुष्टि हुनेमा संघिय प्रहरी कार्यलय बनेपाका ३ जना र धुलिखेल नगरपालिका वडा नं ७ का ९२ वर्षका वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार झाले जनकारी दिएका छन् ।
उनिहरु सबैको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइएरहेको डा. झाले जानकारी दिए । आज चार जना संक्रमित थपिएसंगै काभ्रेमा कोेरोेना संक्रमितको संख्या ५२ पुगेको छ । यस्तै २९ जना उपचार पछि निको भएका छन् भने २३ जनाको आईसोलेसनमा उपचार भईरहेको छ । यसअघि हिँजो पाँचखाल नगरपालिका वडा नम्वर १ अनेकोट पुरानो गाविस भवन गँगले टोल घर भएकी ५० बर्षिया महिलाको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो ।
काठमाडौको किस्ट अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै निधन भए पछि महिलाको कोरोना परिक्षण गरिएको थियो । परिक्षणको क्रममा उनिमा कोराना देखिएको थियो । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको काभ्रेमा यो पहिलो घटना हो ।